ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် အပေါ် Realtyww Info
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in London
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Belper
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Derbyshire
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Rayleigh
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Essex
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Liverpool
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Merseyside
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Edinburgh
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Horley
ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် in Surrey
1 - 10 ၏ 574 စာရင်းများ
အသစ်စာရင်း ပထမ ဦး ဆုံးအနိမ့်သောစျေးနှုန်း စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောပထမ
Parking Only £65 pcm
West London in London, Tw3 3fy
ထုတ်ဝေသည် Bridge Properties
မြင်ကွင်း ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
Parking/garage To Rent In Belper, Derbyshire
* Single garage * For domestic purposes only * Town centre location * Available now213063/3
Belper in Derbyshire, De56 1da
ထုတ်ဝေသည် Your Move - Attenborough Co
1 Bed Parking/garage To Rent In Rayleigh, Essex
Barrett estate letting agents are pleased to offer for rent this garage / lock up situated in this convenient location close to Rayleigh High Street and Rayleigh Train Station. This Garage may also be used for parking and may benefit people who commute to London from the station.Facebook: BarrettsRa...
Rayleigh in Essex, Ss6 7dz
ထုတ်ဝေသည် Barrett Estate Letting Agents
Parking/garage To Rent In North East London, London
Andrew Lloyd are pleased to offer this private lockup garage in the Heart of Angel. Situated offaquiet residential road off Liverpool Road.An early enquiry is advised.
North East London in London, N1 1el
ထုတ်ဝေသည် Andrew Lloyd Estates Ltd
200 Pound £
2 Bed Parking/garage To Rent In East London, London
Beautiful two bedroom, two bathroom apartment in Stepney. The building, 'The Old Courthouse' has regal theme throughout, offeringastylish and secure entrance and lift access to the 2nd floor where the apartment is situated.The location is Stepney, walking distance to tube (District / Hammersmith a...
East London in London, E1 0er
ထုတ်ဝေသည် Atkinson Mcleod - Aldgate
1,898 Pound £
ထုတ်ဝေသည် Sexi Property Group
The garage is situated inaquiet road, just5minutes walk from Streatham Hill Station and Streatham High Road with many shops and restaurants to offer.It isaa fantastic opportunity for parking or extra storage.Please call now to arrangeaviewing.
South London in London, Sw16 1ly
ထုတ်ဝေသည် United Estates Ltd
316 Pound £
မြင်ကွင်း ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်2days ago
Parking/garage To Rent In Edinburgh, Edinburgh
Ref: 1273L: St leonards lane1x Car parking space available for let, only moments away from Salisbury Crags and Arthurs Seat. Located just off the Pleasance/St Leonards, Princes Street is onlya15 minute walk away, and the Commonwealth Pool, George Square and the Meadows are all justashort distanc...
Edinburgh in Edinburgh, Eh8 9sd
ထုတ်ဝေသည် Southside Property Management
60 Pound £
Zero deposit available. Long let. A secure underground parking space set withinapopular development situated by the River Thames and close to amenities in Wandsworth.Eastfields Avenue is ideally located moments from Wandsworth Park and the River Thames, and is also close to the many shops, bars an...
South London in London, Sw18 1lr
ထုတ်ဝေသည် Foxtons - Putney
174 Pound £
Parking/garage To Rent In Horley, Surrey
Woodlands are pleased to offer this single garage. Located en bloc withinasmall and quiet close, it is ideal for storage and very secure. Available now!.
Horley in Surrey, Rh6 9dp
Parking garages For Sale and For Rent on RealtyWW
အမျိုးအစားရွေးပါAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Condos Townhouses Units Studios Villas Cottages Bungalows Log Homes Homes Foreclosed HomesLand lots Residential Land Agricultural Land Industrial LandGarages and parking places Parking garages Parking spacesCommercial Real Estate Hotels Office spaces Business Premises Buildings of free appointment Industrial premises Warehouse spacesAll Others Real Estate All Others Real Estate Ecological Housing Extraterrestrial Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Pest Control Furniture Companies Insurance Services Photography ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers Real Estate Analytics Property Managers Real Estate Consultancy
နိုင်ငံ၊ ဒေသ (သို့) မြို့ကိုရိုက်ပါ
လူနေအိမ်ဂိုဒေါင်တစ်ခု (/ ˈɡærɪdʒ / or / ɡæˈrɑːʒ /) သည်ကားသို့မဟုတ်ယာဉ်များကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်ခိုင်ခံ့သော၊ ခေါင်မိုးတည်ဆောက်ထားသည့်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကားဂိုဒေါင် ") ။ သုံးကားဂိုဒေါင်များကိုအသုံးပြုသော်လည်းလူနေအိမ်များအတွက်ကားဂိုဒေါင်များသည်ကားတစ်စီး (သို့) နှစ်ခုအတွက်နေရာရှိသည်။ အိမ်တအိမ်နှင့်ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုချိတ်ထားသောအခါ၊ ကားဂိုဒေါင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်ထဲသို့ဝင်တံခါးတစ်ခုရှိသည်။ ကားဂိုဒေါင်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကား၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ကိုခွင့်ပြုရန်တံခါးကျယ်ပြန့်သည်၊ ထို့နောက်ကားကိုလုံခြုံရန်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ ကားဂိုဒေါင်သည်ယာဉ်ကိုမိုးရွာသွန်းမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းတွင်သော့ခတ်ထားသောကားဂိုဒေါင်တံခါးတပ်ဆင်ထားပါကယာဉ်များကိုခိုးမှုနှင့်ဖျက်ဆီးခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ ပန်းချီ၊ သစ်သားနှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းများအတွက်ကားဂိုဒေါင်များကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။
နေအိမ် အကြောင်း ဘလော့ဂ် စျေးနှုန်း Sitemap စာရင်းပေးသွင်းရန် ဆက်သွယ်ရန်
မိတ်ဖက်များ ဒေတာပံ့ပိုးပေး ဒေါင်းလုပ်ငါတို့အဘို့အ post တစ်ခုရေးပါTOSကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
နေအိမ် ကျွန်တော်တို့ကိုစာပို့ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ
ပစ္စည်းများကိုပြခန်း / စာရင်းအဖြစ်ပြပါ
မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို၁ ရက်၂ ရက်၁ ပတ်၂ ပတ်၁ လသား